Ubuhle be-Armani bumemezela ubuso obusha bobuhle
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ubuhle be-Armani bumemezela ubuso obusha bobuhle
Ubuhle be-Armani bumemezele umlingisi waseMelika uTessa Thompson njengobuso obusha kakhulu. U-Thompson uzobonakala kuyo yomibili imikhankaso ye-Luminous Silk Foundation ne-Lip Power entsha, eshuthwe umthwebuli wezithombe waseSweden uMikael Jansson.
I-Luminous Silk Foundation yaziwa njengokuvezwa kokuqala kwefilosofi ka-Armani yokwenza ibala liphelele ngokuthinta ukukhanya kakhulu, futhi iza nobubanzi obuhlanganisa imibala engu-40, ukuze ifanele yonke ithoni yesikhumba. I-LIP POWER iyi-lipstick ye-satin yezingubo ezinde ezakhiwe ngamafutha avikelayo, anethezekile nemibala eqinile ukuze ilethe umbala ogqamile ngokugqokwa kosuku lonke, ukunethezeka nomuzwa ongasindi. Ichashazi layo elishintshayo elimise okweconsi livumela ukusetshenziswa kalula kanye nemigqa eqondile, echaziwe.
“Umbono wami ngobuhle usebenza kuwo wonke umuntu wesifazane njengoba buthuthukisa ubuntu bakhe nokuhluka kwakhe. U-Tessa Thompson wangishaya ngamandla akhazimulayo awakhiphayo, ukuzola okunempilo kwendlela yakhe yokuphila. Ngijabule ngokukwazi ukusebenza naye futhi ngiveze ingxenye entsha ye-kaleidoscope yabesifazane yobuhle be-Armani,” kusho u-Giorgio Armani.
U-Tessa Thompson wengeze wathi: “Imibono yethu mayelana nokuhle, ngokwesiko, iyashintshashintsha, futhi iyabahlanganisa. Engikuthandayo ngo-Armani yindlela enika ngayo noma yiluphi uhlobo lowesifazane amandla ukuze azizwe engcono kakhulu.
UThompson, owazalelwa eLos Angeles, waqala emdlalweni weshashalazi wabe esedlala indima encane kumabonakude ngaphambi kokusungula igama lakhe efilimini. Iqhaza lakhe lokuqala eligqamile, eligqamile kwaba yifilimu ethi “Dear White People” ngo-2014, kwase kulandela ifilimu ka-Ava DuVernay ka-2014 ethi “Selma”. UThompson waziwa nangendima yakhe ochungechungeni lwedrama eqokwe u-Emmy ethi “Westworld”. Ngo-2015, u-Thompson wenza inkanyezi ku-"Creed" futhi waphinda wadlala indima yakhe ku-"Creed II" ngoNovemba 2018. U-Thompson okwamanje ukhiqiza i-Creed III. U-Thompson wadlala u-Valkyrie efilimini ye-Marvel ethi “Thor: Ragnarok” ngo-2017, yalandelwa ethi “Avengers: Endgame” ngo-2019, futhi uzophinde abambe iqhaza ku-“Thor: Love and Thunder” ezayo, ehlelelwe ukukhululwa ngo-2022. Ngo-2019, U-Thompson uvele kukhava yephephabhuku i-TIME njengoMholi Wesizukulwane Esilandelayo. Ngo-2020, uThompson waba nenkanyezi ku-"Sylvie's Love", ayikhiqiza naye. UThompson usanda kuthola udumo ngeqhaza lakhe njengo-Irene Redfield efilimini kaRebecca Hall eyakhiwe ngama-1920s ethi “Passing,” ekhishwe ngoNovemba 2021 kuNetflix. Le filimu ithathelwe encwadini ka-Nella Larsen yenoveli ye-Harlem Renaissance yango-1920 ehlola umkhuba wokudlula ngokwebala. Eceleni komsebenzi wakhe wokulingisa, ngo-2021, uThompson wethula inkampani yakhe yokukhiqiza, i-Viva Maude, lapho asayina khona isivumelwano sokuqala ne-HBO/HBO Max, eqala ngencwadi ukuze abonise ukushintshwa kwe- "The Secret Lives of Church Ladies" kanye " Owesaba Ukufa.” Ngaphezu kwalokho, uThompson udale futhi uzokhipha uchungechunge lwe-Hulu olunesihloko esithi “Puzzle Talk,” esakhiwayo njengamanje.
U-Tessa Thompson ujoyina ubuhle be-Armani eceleni kwabalingisi uCate Blanchett, uZhong Chuxi, u-Adria Arjona, u-Alice Pagani, noGreta Ferro; abalingisi uRyan Reynolds, uJackson Yee, noNicholas Hoult; namamodeli uBarbara Palvin, uMadisin Rian noValentina Sampaio. Ubuso bobuhle be-Armani ngabunye, ngendlela yabo ehlukile, bufaka umbono wobuhle ka-Giorgio Armani.
Usomabhizinisi waseShayina eTonga ubika ngesimo sesiqhingi manje
Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kuhlola Ukukhuthazwa Kwengqondo Ejulile Ukuze Ukwelapha I-Alzheimer's
Ungqongqoshe u-Bartlett eCanada we-“Jamaica 60” Ebalulekile...
Ozakwethu abavela eTurin Bawina Okokuzithokozisa Okukhulu eSeychelles
Ukubhaliswa Kokuqala Kokusebenza Okumaphakathi ukuya Kakhulu...
I-IMEX Group kanye ne-Messe Frankfurt bandisa ubudlelwano babo
ISaudi Arabia imemezele ukuthi amazwe ayi-16 aseqinisweni…
Ukuthuthukisa Umbono We-macular Ehlobene Neminyaka Eyomile...
Amakhasimende akwaMcDonald eRussia Amemeza Ngokusekela...
Ukuhamba ngendiza phakathi kwe-US ne-Europe kukhuphuke ngamaphesenti angama-659 manje
I-Electromyography Devices Ukuhlaziywa Kwemakethe Okujulile...
I-Sandals Foundation Isiza Izikole Ngamanzi Angcono...
Ozakwabo bakwaHeathrow badlala ochungechungeni olusha sha lwe-BBC 1
Iziqiwu Ezi-5 Ezingcono Kakhulu Zezilwane Zasendle e-Uganda
Sawubona, Kuhle! INTOMBAZANE EHLAYAYO e-Sofitel New York manje
I-Nevis ibamangaza kanjani abavakashi bayo?
I-Dupixent Igunyazwe Izingane Ezinesifuba Esinamandla
I-St. Maarten imemezela izinyathelo zokuqala ku-“Transition...
Izindiza ze-Atyrau eziya e-Istanbul ku-Air Astana manje
I-Outlook ye-Black Pepper Market Ikhava Ibhizinisi Elisha...
Idivayisi Yezokwelapha Engenazindleko Yokukhathazeka Nokuqwasha
Amadolobha asemfashinini emhlabeni wonke ongawavakashela kulo nyaka
I-Vagal Nerve Stimulator Entsha Yokwelapha I-COVID ende
Impi yonya lwaseRussia e-Ukraine yadla iGibhithe...
IVolaris: Unyaka nonyaka bafuna ukukhuphuka ngama-32% ngo-Ephreli
Isikhwama sikaWendy sika-$5 sikaBiggie esinezinketho eziningi
Imakethe Yedivayisi ye-Elastography Edlulayo Ehamba phambili...
FRAPORT Amanani Abalulekile Okusebenza Athuthuka Ngokuphawulekayo
IFraport, iLufthansa kanye neSikhumulo sezindiza saseMunich zifuna kube nobulungiswa...